जनताको स्वास्थ्य सेवामा भक्तपुर नगरपालिका संधै जनताको साथमा छ ः प्रमुख प्रजापति – Bhaktapur Khabar
सुनिल प्रजापति, प्रमुख— भक्तपुर नगरपालिका
By Bhaktapur Khabar	 Last updated Feb 11, 2021
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का. नारायणमान बिजुक्छेँज्यूबाट श्वास प्रश्वास पुनःस्थापन केन्द्रको उद्घाटन गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुशी छौं । भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तर काम गर्दै आएकोमा आजबाट थप एउटा सेवा बिस्तार गर्दैछौं । यस केन्द्रको उद्घाटन २०७६ चैत्र ३ गते गर्ने र सोही दिनबाटै सेवा सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो तयारी थियो तर अन्तिम समयमा आएर कोभिडका कारण रोकिनुपर्यो । आज झण्डै १० महिनापछि यो कार्यक्रम गर्दैछौं ।
आज पनि कोभिडकै कारण जापानबाट आउने प्रतिनिधि साथीहरु आउन सक्नुभएन । उहाँहरुको भिडियो सन्देश प्राप्त भएको जानकारी आएको छ । यस सेवा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने जापान सरकार र सहयोगी संस्था जिम्टेफप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं । हाम्रा चिकित्सकहरुले जापानमा गएर दम खोकीको उपचार सम्बन्धी तालिम लिएर आउनु भएको छ । ती तालिम प्राप्त चिकित्सकहरुबाट अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिने कार्य पनि भइरहेको छ ।
नेपालमा सर्ने भन्दा नसर्ने रोगहरुले जनता आक्रान्त बन्दैछन् । दम खोकीजस्ता श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगले पनि धेरै जनता पीडित छन् । विश्व वातावारणमा आएको परिवर्तन, अनियन्त्रित जंगल फडानी, तीव्र गतिमा शहरीकरण, औद्योगिकीकरणसँगै धुलो, ध्वनी र रसायन उद्योगहरुबाट हुने वातावरण प्रदूषण तथा अनियन्त्रित रुपमा आयातित सवारीसाधनहरुले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलाई मलजल दिइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट उचित प्रयास र जनता सचेत नभएसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।
विश्वको औसतभन्दा बढी नेपालमा वातावरण प्रदूषण भएको र काठमाडौं उपत्यका झन् बढी प्रदूषित भएको विभिन्नि रिपोर्टहरुमा जनाइएको छ । भक्तपुरबासीहरुमा बढ्दै गएको दम खोकीको उपचारसम्बन्धी खोजी गर्दै जाने क्रममा श्वासप्रश्वास पुनःस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्नेमा हामी पुग्यौं । यसलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनेछौं ।
आर्थिक उदारीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवा पनि बिस्तारै निजीकरण हुँदै गएपछि गरिब जनताको लागि स्वास्थ्य उपचार निकै महँगो हुन पुग्यो । स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकहरूको सहज पहुँच र सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले च्याम्हासिंह, भगवतीस्थान र ब्यासी गरी तीनवटा जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोभिड महामारीबीच पनि भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ती स्वास्थ्य केन्द्रहरु बन्द भएनन् । जनतालाई संकट परेको बेला झन् बढी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आयौं ।
ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी सेवा, हाडजोर्नी, नाक कान घाँटी, एक्स रे, दन्त सेवा, ल्याबसहित १९ थरिको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा २०७७।७८ को बितेको ६ महिना (श्रावनदेखि पौष मसान्तसम्म)मा भनपाबाट सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट कुल ५५ हजार भन्दा बढी बिरामीले उपचार पाएका छन् । मासिक ९ हजार भन्दा बढी अर्थात औसतमा दैनिक ३ सयभन्दा बढी नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र च्याम्हासिंहमा सञ्चालनमा छ । त्यस केन्द्रबाट आ.व. २०७७।७८ को बितेको ६ महिनामा १५,३६८ जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ । त्यस केन्द्रबाट आँखा जाँच, चश्मा जाँच, मोतिबिन्दु शल्यक्रिया, जलविन्दुको जाँचलगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त सेवाबाट जनता आँखाको सामान्य उपचारको लागि काठमाण्डौको तीलगंगा आँखा अस्पतालसम्म जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । ख्वप अस्पतालकै प्रांगनमा व्यवस्थित आँखा अस्पताल बनाउने तयारीलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौं ।
यही माघ महिनाको २४ गतेदेखि भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरस्तरीय नागरिक आरोग्य केन्द्र पनि सञ्चालनमा आएको छ । आर्युवेदिक औषधीको उपचारमा पनि भक्तपुरमा सहज सेवा उपलब्ध भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
देशकै सानो नगरमध्ये पर्ने भक्तपुर नगरपालिकाभित्र स्तरीय क्यान्सर अस्पताल, शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालहरु छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जनताकै जग्गा र पैसाबाट निर्माण भएकोलाई नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामको गैरसरकारी संस्थाले निजी अस्पतालझैं चलाएको र त्यहाँ भ्रष्टाचारको समाचार बाहिरिन थालेपछि नगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापन समिति गठन गरेर सञ्चालन सुरु गर्यो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण त्यहाँ नगरपालिकाले प्रत्यक्ष काम गर्न पाएन तर उक्त अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन भने निरन्तर जोड दिइरह्यो । यही २०७७ साल कार्तिक महिनादेखि मन्त्रिपरिषदबाट गठित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेशको आधारमा सरकारी स्वामित्व प्राप्त भएको छ । अब अन्य सरकारी अस्पतालसरह नै जनताले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
भक्तपुर नपामा जनप्रतिनिधिले पद्भार ग्रहणसँगै भक्तपुर अस्पतालमा पनि विगतका कमी कमजोरी हटाइ राम्रो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुधारका निकै प्रयासहरु भए । अस्पतालसँगैका जग्गा केही वर्षको लागि अस्पताललाई प्रदान गरी त्यहाँ आईसीयुभन्दा कम र सामान्य भन्दा माथिको हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट समेतको बन्दोबस्तसँगै अहिले २०० बेडको स्वीकृति आएकोे जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त अस्पतालमा ५ जना नर्सहरु र अन्य केही स्टाफहरु नगरपालिकाले खटाई सेवामा सहज बनाइरहेको छ । खुशीको कुरा हो, यो वर्ष भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशकै एक उत्कृष्ट अस्पताल हुन सफल भएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई २५ शैय्याको अस्पताल संचालनको लागि स्वीकृति प्राप्त छ । सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यले ख्वप अस्पताल भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उक्त भवन सञ्चालनमा केही ढिला हुने सम्भावना भएकोेले छिटै नै हामीसँग उपलब्ध भवनहरुमा अस्पताल सञ्चालनको तयारी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं ।
भक्तपुर नगरपालिकाले निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार देशमै पहिलोपटक घरदैलो नर्सिंङ सेवा सुरु गर्यो । वडा वडामा खुला व्यायामशालाहरु स्थापना गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई शारीरिक व्यायामको अवसर प्रदान गर्यो । कोभिडको बेला सुविधासम्पन्न आइसोलेसन केन्द्र, क्वारेनटाइनको बन्दोबस्त र ती केन्द्रहरु र घरघरमा एकान्तबास बसेका नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आयो । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु सदा जनताको साथ र सेवामा समर्पित रहँदै आउनु भएको छ ।
क्यान्सर, मस्तिष्कघात, मृगौला र मुटु रोगजस्ता घातक रोग लागेका बिरामीहरुलाई सरकारी सुविधाको अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले आर्थिक सहयोग समेत नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिका संधै जनताको साथमा छ । भक्तपुर शिक्षा, सम्पदा संरक्षण, र सरसफाइमा उत्कृष्टतासँगै अब स्वास्थ्य उपचारमा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । नगरपालिकाको काममा निरन्तर साथ र सहयोग प्रदान गर्नु भएका सम्पूर्ण नगरबासी दाजुभाई दिदी बहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै निरन्तर सहयोगको अपेक्षासहित बिदा हुन्छु ।
(२०७७ माघ २९ गते, बिहीबार श्वासप्रश्वास पुनःस्थापन केन्द्रको भवन उद्घाटन तथा उपचार सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको मन्तव्य)
उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागी
राममन्दिरको मुःदीप करिडोरको स्थलगत निरीक्षण (हेर्नुहोस् तस्बीरमा)
हामीले श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका नगरवासीहरुको सेवा गर्ने अवसर पायौं ः उपप्रमुख जोशी